हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: नेपालमा सशस्त्र दलित आन्दोलन र धर्म परिवर्तन को आवश्यकता
दूर्जेय चेतना August 18, 2009 at 3:59 PM
दूर्जेय चेतना August 18, 2009 at 8:08 PM
मती भ्रष्ट भएछ तपाईको। बाहुनले लेखेको भनेर के भन्न खोजेको हो? यो लेख बाहुनले लेखेको हो भनेरै ठिक गर्नु भएन। जस्ले लेखे पनि यो कुरा भनिरहदा, यहाँ समस्या बाहुन ब्यक्तीको हैन, समस्या बाहुनबादको हो। यो कुरा भुल्नु हुदैन। जो सुकै होस, एकदमै गलत र थर्ड कलास बिचार हो यो। देशमा न कुनै कानुनले काम गर्छ न त कुनै आन्दोलन वा हतियार उठाएर समस्याको सामाधान हुन्छ। यसो हुने भए तपाईले लेखेको भन्दा पनि बढी खतरनाक र क्रान्तिकारी नारा लिएर समाज सुधार र आमुल परिबर्तनको नारा लिएर बिसौ हजारको बलि चडिसकेको छ। अझै पनि बुघ्दीमा बिर्को लागेको देखेर दिक्क लाग्यो।
अब कुनै आन्दोलतन हुनु पर्छ भने मित्रता र सदभाबको आन्दोलन हुनु पर्छ। मेरो कामी र दमै साथीसंग निन्तान्तै घनिष्ट मित्रता छ, मलाई त कहिलै पनि यो कुराको यादनै रहेन कि उनीहरु तल्लो जातका हुन। किनहोला? थाह छ,?
शिक्षाको लागि क्रान्ति गर्नु पर्छ, आर्थिक बिकासको लागि क्रान्ति गर्नु पर्छ, हतियार उठाएर कहाँबाट आउछ र सामाजीक सु‍-ब्यबस्था? कुनै समाजमा राज्यले घोषणा गरेर हुदैन भन्ने कुरा त मुलुकी ऐेनको यत्रो समय पछिको कालखष्डमा पनि बहसको बिषय भएकोले प्रमाणित गरिसक्यो।
याद रहोस यदी ७०- ८० % हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरु यसको प्रतिकारमा उठे भने के हुन्छ? कसैले सोचेको छ?। यति ठुलो बाहुल्यता हुदा हुदै पनि आफ्नो धर्म र ब्याबस्था माथिको खुल्ला हस्तक्षेप सहनु उनीहरुको महानता र सुधारलाई सहर्स स्बीकार गर्ने क्षमताको कदर गर्नु पर्छ की पर्दैन? के यो उनीहरुको सामाजिक महानता हैन?। बाहुन भित्र वा दिन्दू धर्म भित्र पनि धर्मको नाममा युद्धको घोषणा नभएको हैन, तर हुदा हुदै पनि किन सफल हुनसकेको छैन? थाह छ?
किनकि आम दिन्दूबादीहरु सामाजिक मान्यता र सु-ब्यबस्थामा बिस्वास गर्छन्। यो कुरालाई किन बुझिदैन? यदि हिन्दूहरुलाई धर्मकै नाममा चिडाउने काम भयो भने र उनीहरुलाई प्रतिकारको लागि हतियार उठाउन बाध्य परियोभने के हाल हुन्छ ? यो कुरा कसैले सोचेको छ?
यो सेन्टीमेन्टलाई नबुझेर सिमित मान्छेले गरेको कुकर्मको लागी फेरी मान्छे मार्ने खेती तिर उकास्नु र तर्क गर्नु कु-बुद्दि भन्दा केही हैन। मेरो घोर आपत्ती छ यो बिचारमा।।।।।।।।।।।।।।।।
मैले यसो भन्नुको मतलब दिन्दुबादको समर्थन गरेको हैन म पनि समाजमा भएको यो नराम्रो ब्यबस्थाको बिरोधी हु। मेरो मान्यता लडेर हैन मिलेर सामाधान गर्न सकिन्छ, यसको लागी बैचारिक क्रान्तिको आबस्यकता छ भन्ने मात्र हो।। चेताना भया।।।।
wordflows August 19, 2009 at 5:58 AM
हो हो ससत्र आन्दोलन हुनु पर्छ। मान्छे मर्नु पर्छ। अहिले सम्म येहि त भै रा छ। वाइयात
हावा De Wind August 19, 2009 at 8:24 AM
हेहेहे दूर्जेय ब्रो, बडो टेन्सन भएछ तपाईंलाई.. बाहुन ले लेखेको भनेर यसकारण प्रस्ट गरेको हो कि कसैलाई भ्रम नहोस् कि यो दलित को वा हिन्दू धर्म बिरोधी कुनै सन्स्थाको अजेन्डा वा बिचार हो... र कुनै हिन्दू परम्पराबादी हरु कुरै नबुझी तपाईंले भने जस्तो र अहिले भारत ईन्डिया मा भैरहे जस्तो घटिया प्रतिकार मा न ओर्लिउन..
म त चाहन्छु नै यो कि तपाईं मलाई गलत प्रमाणित गर्नुस्.. तपाईंको शान्ती र मेलमिलाप को भावना निस्चित रुपमा प्रसन्सनिय छ तर त्यो पर्याप्त छैन..अर्को कुरा कोही कुरै नबुझी प्रतिकार मा ओर्लिन्छन भने प्रतिकार को पनि प्रतिकार हुन्छ भन्ने पनि नबिर्सौ
दीप ब्रो, हेहेहे तपाईंलाई पनि टेन्सन भएछ.. बदो मजा आइलियो.. ब्रो मान्छे त तेसै पनि मरेकै छन.. कसरी मर्छन भन्ने कुरा मात्र हो.. कोही अधिकार प्राप्ती को लागि लडेर मर्छन भने कोही झाडापखाला अनी भोकमरी ले मर्छन
Milan August 20, 2009 at 7:08 PM
समानता र आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन आवश्यकता परे हरेक दिन हुनु पर्छ, आन्दोलन गर्नु नहुने भन्ने कहिँ केहि छैन | अनि अर्को कुरा हिन्दु सँधै हिन्दु र क्रिष्टियन सँधै क्रिस्टियन नै हुनुपर्छ भन्ने नि छैन..... आफ्नो इच्छा अनुसार जसले जुन धर्म अंगाल्न पनि पाउँछ..
मैले यो पोष्टको समस्या आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्दा नि आन्दोलन कस्तो गर्ने र धर्म परिबर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्दा नि धर्म परिबर्तन कसरि गर्ने वा नगर्ने भन्ने मै देखें
सूर्य/सिकारु August 21, 2009 at 2:06 PM
धर्मको नामले वा कुनै जातिय नामले जनतामा अनि देशमा उदण्डता मच्चाउने काम गर्नु भनेको अत्यन्त नराम्रो कुरा हो। हावा ब्रोले यति मनन गर्नु पर्‍यो की यो सबै अशिक्षा, अज्ञानता, गरिबी र पाखन्डीहरुको भ्रम हो । बाहुन या जनजाती कामी या दमाई कसैलाई पनि यसरी संकेत गरेर निन्दनिय कुरा गर्नु राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई । यदि जातिय रुपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने दलित र जनजाती या उत्पीडन बर्गको उत्थानको लागी कसबाट र कहाँबाट संघर्ष शुरु भएको छ? ईतिहास पल्टाउन सक्नुहुन्छ । हामी दलित हौ भनेर सधै सिनो र घन पिटेर मात्रै बस्ने की शैक्षिक योग्यतालाई पनि काख लिएर समाजमा एउटा उच्च नगरिक भएर जीउने प्रयास गर्ने? यो आफैमा गम्भिर सोचनिय बिषय हो । त्सैले म आफु जे भएपनि समान अधिकार लिएर जीउने अधिकार सबैलाई छ । आर्को कुरा सबैलाई आ-आफ्नो धर्म प्रति आस्था हुन्छ त्सैले कसैको धर्मलाई यस्तो उस्तो नभनेकै राम्रो ।
ho dalit aandolanko aawasykata chha tara dalitharuko adhikarko lagi shantipurna aandolan bhaemaa ramrai ho tara dharma pariwartan garidaimaa k hunchha ra?
milan limboo August 23, 2009 at 8:52 AM
had line ta ramro nai ho tara pani mukha ma ram ram hola ne.
हावा De Wind August 23, 2009 at 10:46 AM
मिलन ब्रो, भारत मै पनि धेरै दलितहरु ले छुवाछूत प्रथाको बिरोध गर्न सामुहिक रुपमा बुद्ध धर्म मा परिवर्तन गर्दा रहेछन..नेपाल मा पनि ब्यक्तिगत रुपमा त धेरैले गर्दा त रहेछन तर इच्छुक हरुले सामुहिक रुपमा गरेको भए सुधार को लागि दबाब हुने थियो होला
सुर्य ब्रो, मैले पनि हिन्दू धर्म का सबै कुरा खराब छन भनेको हैन तर शान्ति शान्ति जपेर जती नै कोटी होम गरे पनि समाज मा झन झन असान्ती बढनु को एउटा कारण हिन्दू धर्म को बिभेदकारी परम्परा पनि हो
अग्यात ज्यु, ब्यक्तिगत रुपमा भैरहेको धर्म परिवर्तन लाई सामुहिक धर्म परिवर्तन माध्यमबाट सामाजिक सुधारको लागि दबाब दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ
मिलन ब्रो, कुरा हार्ड र सफ्ट लाइन भन्दा पनि कुरा परिवर्तन को हो.. मैले पनि त्यही भनेको हो मैले मुखमा राम राम मात्रै गरे केही छैन ठिकै हो.. मेरो बगलिमा छुरा हुनुभएन
Pakhrin September 12, 2009 at 12:57 PM
दलित-उचो, तागाधारी-मतावली, नाक चुच्चे-थेप्चे, हिन्दू-अहिन्दूको कुरा गरेर समाजमा फाटो सिर्जना गर्नु भन्द पर बसेर सामाजिक सदभावका कुरा गरेर नेपाली-नेपाली विचमा एकताको कुरा गर्नु आजको आवश्यक हो जस्तो मलाई लाग्छ साथीहरु । हामी अधिकारको कुरा गर्छौँ, तर कर्तब्यको कुरा बिर्सन्छौँ । अरुलाई होच्याउन सिपालु हुन्छौँ, तर प्रशँसा गर्न कञ्जुस्याई गर्छौँ, आदर गर्न हच्किन्छौँ । आखिर यो समाज निर्माण कस्ले गर्ने हो त ??? तपाई हामीले नै हैन त ??? सभ्य समाज निर्माणको लागि साथ कस्को खोज्ने त, तपाई हाम्रै हैन त? हामी अर्काको कुरा काट्न सजिलो मान्छौँ, अरुले गर्न नसकेको ठान्छौँ । कमसे कम गरेर त हेरौँ न हामी आफ्नो लेभलबाट के गर्न सक्छौँ जस्ले हाम्रो समाज हामीले चाहेको जस्तो बनाओस् !
ब्राह्मणवाद: "नाकचुच्चे र नाक थेप्चे को अर्थमा मात्र सफल भयो" ... सत्य बचन ।
एउटा यथार्थ: "ब्राह्मणवाद" शब्द बनाउँदा बाहुन नेपालिहरुको पनि सहयोग छ । बरु के सोचेर "ब्राह्मणवाद" शब्द बनाए अनि अैले अरुले के अर्थ निकाले ... यो देखेर सायद वहाँहरु दुखी होलान् ।
मेरो भनाई: ब्राह्मणवाद शब्द सँग बाहुनहरुको कुनै संबन्ध छैन । "ब्राह्मणवाद" शब्द "ब्राह्मणको वाद" सँग संबन्ध छ, मनु सँग छ तर घर छेउको बाहुन वा पुजारि सँग छैन । देशचलाउने सिस्टमको बिरुद्धपो हो कुनै ब्यक्ति बिरुद्ध होईन ।
उदाहरण: मुख्य काँग्रेशमा बाहुन, मुख्य कम्युनिस्टमा बाहुन, मुख्य सचिव बाहुन, मुख्य न्याधिश बाहुन, उहिलेको राजाको सहयोगि पनि बाहुन, अनि शैनिकमा ठकुरि आदि ईत्यादि ... यो पो हो ब्राह्मणवाद ।
ईतिहासमा बाहुनलाई पढ्न दिए त्यसैले धेरै बाहुनहरु ठुलाबडा हुनु सत्य हो । अनि ति ठुलाबडाका छोरा छोरि पनि ठुलाबडा भए - यो हो "ब्राह्मणवाद" ।
नजिकैको ईतिहासमा क्रिश्चियेन धर्मिलाई कानुन-प्रहरिले कारवाहि गर्थे । त्यो प्रथा हो ब्राह्मणवाद ।
बाहुन सँग ब्राह्मणवादको कुनै सँबन्ध छैन । सिस्टम सँग छ । "ब्राह्मणवाद" गर्ने बाहुन होस मा गैर बाहुन, तिनि हारुसँग सँबन्ध छ ।
मेरो भुँईफुट्टे नेताहरुको मुखमा थुक्ने सपना छ ।
गरिब देशमा एक माहिनामा एक लाख कमाउँछन्... यो हो "ब्राह्मणवाद" ।